अर्थतन्त्रका लागि मिश्रित वर्ष - Karobar National Economic Daily
अर्थतन्त्रका लागि मिश्रित वर्ष
query_builderApril 11, 2017 9:01 AM supervisor_accountगजेन्द्र बुढाथोकी visibility1368
लगातार दुई वर्षको मन्दी (अझ, अर्थशास्त्रीहरूको भाषामा त उच्च मुद्रास्फीति वा हाइपर इन्फ्लेसनको चरण) पार गरेपछि यो वर्ष आशाका केही संकेत देखिएका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नेपाल प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा ५.६ देखि ६.२ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को आर्टिकल फोर प्रतिवेदनले भने यो वर्ष ५.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले हौसिएर सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार नै साढे ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ भनेर ठोकुवा गरिरहेका बेला स्वयं तथ्यांकीय निकाय भने यो वृद्धि प्रक्षेपणप्रति त्यति आशावादी छैन ।
औसतमा साढे ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ कि भन्ने आशा भएको विभागका अधिकारीहरूले पंक्तिकारलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसको मुख्य कारण हो, सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च ।
वरिष्ठता विवादमा अलमलिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत गर्न नसकेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनै सकेको छैन, चैत २४ गतेसम्म कुल विनियोजनको जम्मा २४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।
त्यसो त आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा गएर पुँजीगत खर्च सक्ने सरकारको आमप्रचलन नै हो, तर त्यसले अर्थतन्त्र, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र समग्रमा आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान कुनै योगदान नै गर्न सक्दैन ।
भनिन्छ, सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँ खर्च गर्छ । वैशाखदेखि चैतसम्मकै मूल्यांकन गर्दा अर्थतन्त्रमा खासै क्रियाशीलता सिर्जना भएको देखिएन ।
समयमै बजेट पेस गरिएका कारण त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, कुल साढे १० खर्बको बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म मुस्किलले सवा ४ खर्ब, त्यसमा पनि विकास गतिविधिमा प्रत्यक्ष जाने पुँजीगत बजेट ७६ अर्ब ७५ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारबाट आउँदो चार महिनामा बाँकी ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएर रातारात आर्थिक वृद्धि माथि उकासिन्छ भनेर आशा गर्नु मृगमरिचिका मात्रै हो ।
वर्ष २०७३ लाग्दा केही आशाका बिन्दु देखा परेका थिए । २०७२ वैशाखको महाभूकम्प र सोही वर्षको असोजदेखि माघसम्मको भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको थियो । अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।
यसका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले ठोस आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा थियो । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण नाम गरेको केवल राज्यकोषमा थपिएको अर्को व्ययभारले यसबीचका केही ठोस काम गर्नै सकेन ।
प्राधिकरण नै सुस्त भएपछि अघिल्लो वर्ष दाताहरूले पुनर्निर्माणका लागि कबोलेको सहयोग पनि परिचालित हुने सम्भावनै भएन ।भूकम्पपछि नेपालीहरूको सहन र वहनशीलताबारे विश्वभरि प्रशंसा भयो । ठीक यही सन्दर्भ नेपाली अर्थतन्त्रका हकमा पनि लागू हुन्छ ।
सरकारले केही गरिदिनै परेन, न लगानी न त नीतिगत सहजीकरण । प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरूलाई रिबन काट्दै, पानसमा बत्ती बाल्दैमा फुर्सद भएन । डेढ महिनाअघि बजेट ल्याएर के गर्नु ?
सरकारी कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली उही हो । पत्र काटिएको छ, प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, काम गर्ने तरखर भइरहेको छ, भन्ने प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेर विकास प्रक्रियालाई सुस्त तुल्याए पनि अचम्म ! आर्थिक वृद्धिदर त साढे ५ देखि ६ प्रतिशत पुग्ने भएछ ।
प्रधानमन्त्रीले त मक्ख परेर भन्दिन भ्याए— हामीले जति आर्थिक वृद्धि कसैले गर्न सकेन । तर, कुन आधार टेकेर यो तहको आर्थिक वृद्धि भयो ? कुन–कुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस अवधिमा सम्पन्न भए ? भन्ने विषयमा उनी स्वयंसँग जवाफ भने छैन ।
अर्कातिर नेपाल राष्ट्र बैंक तथ्यांकीय जादु गरेर मुद्रास्फीति दरलाई शून्य प्रतिशतमा झार्नतिर लागिरहेको छ । करिब ३ प्रतिशतका हाराहारीमा त उसले झारिसकेको छ, असारसम्मका शून्य प्रतिशत मुद्रास्फीति भन्दियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
आमउपभोक्तालाई थाहा छ, यो सबै तथ्यांकीय जालझेलसिवाय केही होइन । सरकारअनुकूल आर्थिक तथ्यांकहरूमा गोलमाल गर्ने प्रचलन नयाँ होइन, यो विगतदेखि नै चल्दै आएको खेल हो । वरिष्ठ मौद्रिक अर्थशास्त्री स्व. राघवध्वज पन्तले बारम्बार राष्ट्र बैंकका तथ्यांकीय गोलमालको भन्डाफोर गर्ने गरेका थिए ।
उनको निधनपछि समयबद्ध रूपमा तथ्यांकीय विवरणहरूलाई दाँजेर मूल्यांकन गर्ने अर्थशास्त्रीहरू निकै कम छन्, त्यसैले राष्ट्र बैंकले जे भने पनि पत्याउनै परेको छ ।
यद्यपि, राम्रो कामलाई राम्रो पनि भन्न सक्नुपर्छ ।
विगत केही समययता नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका नीतिको असर वित्तीय प्रणालीमा केही बढेर गएको छ । विशेषतः मर्जर र एक्विजिसनको नीति आएपछि संख्यात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अवस्थामा सुधार आएकै छ, तर हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्न थालिएपछि भने वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १० देखि १५ र समग्र वित्तीय संस्था १ सयको आसपासमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन कठिनै देखिन्छ ।
यसबीचमा राष्ट्र बैंकले चीनबाट नोट छपाइ गरेर ल्याएपछि समग्रमा मुद्रा छपाइको लागत घटेको छ । अल्पकालीन रूपमा देखा परेको अधिक तरलताको संकट सम्बोधन गर्नमा पनि राष्ट्र बैंक सक्षम देखिएको छ ।
यो सकारात्मक संकेत हो । यद्यपि, समस्या पूरै टरिसकेको भने छैन । बैंकरहरू आफैं अहिलेको शान्त अवस्थालाई खरानी हालेर छोपिएको भुंग्रोको संज्ञा दिन्छन्, अर्थात् फेरि तरलता र लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या कुनै पनि दिन बल्झिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सम्बन्धी विवाद अझै सल्टेकै छैन । त्यसैले अस्थायी समस्या निराकरणबाट धेरै आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छैन ।
२०७३ का पछिल्ला महिनाहरू साँच्ची नै नेपाली अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका लागि आशावादी रूपमा देखिएकै हुन् । २०६५ सालयता आमनेपाली र समग्र अर्थतन्त्रकै लागि अभिशापका रूपमा रहँदै आएको लोडसेडिङ कुनै दिन यसरी ठप्पै रोकिन्छ भनेर कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।
तर, कुलमानसिंह घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिएपछि सही व्यवस्थापन नीति अपनाउँदा हिउँदको कम जलप्रवाह भएको अवस्थामा समेत आमनेपालीले कुनै पनि दिन लामो लोडसेडिङ झेल्नुपरेन ।
उनका पूर्ववर्ती प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले त फागुन–चैतमा लोडसेडिङमुक्त गर्न सके आफू कुनै सार्वजनिक पदमै नबस्ने चुनौतीसमेत दिएका थिए । गत दसैं–तिहारमा काठमाडौंमा प्रयोगका रूपमा सुरु गरिएको लोडसेडिङमुक्तिको अभियान चैतसम्म आइपुग्दा देशभरि नै लागू गरियो । यसका लागि उपयुक्त निर्णय र नीतिगत सहजीकरण गरिदिएकोमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासमेत पक्कै पनि बधाईका भागीदार छन् ।
निरन्तर विद्युत् उपलब्धताको प्रभाव अब अर्थतन्त्रका देखा पर्नेछ नै, किनकि यसले उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू मात्र होइन, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि निरन्तर चलेर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुनेछ । प्रत्यक्ष रूपमा डिजल र पेट्रोल खपतको बिल कम भएको फाइदा त छँदै छ ।
यसले शिक्षा–स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गगन थापाको नेतृत्वमा सुरु गरिएका सकारात्मक पहलहरू २०७३ को अर्को उपलब्धि हो ।
स्वास्थ्य नै धन हो भनिन्छ, आमनागरिकको स्वास्थ्यसेवा पहुँच वृद्धिका लागि हाल थालिएका कार्यहरूले निरन्तरता पाउन सके, त्यसबाट राष्ट्रको मानव पुँजीले पाउने लाभलाई मुद्रामा आकलन गर्न सकिँदैन ।
बन्द संस्थानहरू चलाउनमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले चालेका कदमहरू पनि अर्थतन्त्रमा आशा बढाउने प्रयास हुन्, तर तिनको स्थायित्वमा अझै प्रश्न उब्जिरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धेरैजसो अर्थशास्त्रीको एकमत के छ भने यदि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने यहाँको अर्थतन्त्रले अवश्य गति लिन्छ । त्यसैले वर्ष २०७४ ले स्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त ग-यो भने अबचाहिँ हामी पनि विकासका पथमा अग्रसर हुन सक्छौं कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
आशामात्र छैन, केही चुनौती पनि छन् । आउँदो वर्ष तीनवटा निर्वाचन हुनेछ, निर्वाचनजन्य खर्चका कारण मुद्रास्फीति बढ्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने आकलन छ । निर्वाचनका चन्दाले यता कालोबजारी फस्टाउने चक्र त छँदै छ ।
अर्थतन्त्र मुद्रास्फीति उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी एसियाली विकास बैंक